Mamwe Mapato Anopikisa Oshoropdzawo MDC Alliance neNyaya yeZvirango
Mutungamiri weNCA Professor Lovemore Madhuku nemutauriri webato VaMadock Chivasa
Danho rakatorwa nechikwata chaipa humbowo hwemamiriro akaita zvinhu muzimbabwe kudare reSeneti remu America yekuti zvinhu zvirambe zvakamira sezvazviri panyaya dzezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe yasimudza mutauro mukuru muvana veZimbabwe nevamwe vekunze vari kutevera zviri kuitika munyika.
Vamwe vanhu vakawanda vari kundokodzera bato reMDC-T nekwavari kuti kukumbira kuti zvirango zvirambe zviripo.
Vamwewo ndivo vari kuti chikwata cheMDC Alliance chakatumwa nemutungamiri weMDC-T, VaMorgan Tsvangirai ichi chaive nekodzero yekuti chiudze America kuti kana zvinhu zvisina kushanduka muZimbabwe zvinhu zvirambe zvakamira sezvazviri.
Izvi zvinotevera kupa humbowo kwaVaTendai Biti vakanga vakamirira MDC Alliance, VaDewa Mavhinga vanove gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, pamwe naPeter Godwin, anove mutori wenhau ari muno muAmerica asi ari chizvarwa cheZimbabwe.
Kunyange hazvo munhu wese aine kodzero yekutaura pfungwa dzake, vamwe vari kuti zvakaitwa nevana veZimbabwe ava zvinhu zvavakanga vasingatarisire kuti zvingaitike.
Vakawanda kusanganisira mapato anopikisa, vari kupomera mhosva vatatu ava yekukumbira kuti America isabvise zvirango, izvo zvinogarochemwa nazvo neZanu PF kuti ndizvo zvakonzeresa matambudziko ari munyika.
Mutairiri weNCA, VaMadock Chivasa vanoti sebato rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe haringatsigiri kushupika kwevana veZimbabwe kusvika pakukumbira zvirango, izvo vanoti zviri kuuraya vanhu.
VaChivasa vanoti zvaifanirwa kuitwa nemubatanidzwa weMDC Alliance kutanga yatsvaga nhaurirano nehurumende yavepo, kwete kumhanyira kukwira ndege kuenda kuAmerica.
Asi mutauriri weMDC-T VaObert Gutu vanoramba mashoko ekuti bato ravo rakaenda kunokumbira kuti zvirango zvisabviswa, vachiti naivovo sebato havatodi kuti pakurudzirwe zvirango zvinozonetsa vana veZimbabwe.
“Zvirango izvi zvinotambudza varombo nekuti vane mari dzavo vanonorapwa kunanaSingapore. MDC-T haife yakakokera muchetura unourayisa vana veZimabwe,” VaGutu vanodaro
VaGutu vanoti vanotonetsekanawo pamusoro pezvirango izvi, vachiti bato ravo harina simba rekubvisa kana kuwedzeresa zvirango sezvo izvi zvichiitwa chete nekongiresi yeAmerica.
Asi VaChivasa vanoti vana veZimbabwe havafanirwi kuvhotera vanhu vari kukumbira zvirango izvi, avo vanoti vatengesi.
Hurukuro naVaMadock Chivasa pamwechete naVaObert Gutu